GadaaTube: Radio Afuura Biyyaa: Interviews with Dr. Beyan Asoba, J/ Jawar Mohammed and J/ Leenco Lata – May 2, 2012 « GadaaTube
Radio Afuura Biyyaa: Interviews with Dr. Beyan Asoba, J/ Jawar Mohammed and J/ Leenco Lata – May 2, 2012
See More Videos	Seife Nebelbal Radio: Interviews...
Dagalee Media: Interview with ODF...
Mana Oromoo Swiss Blog: Hiriirri...
Radio Simbirtuu: Mudde 20, 2012
Title: Radio Afuura Biyyaa: Interviews with Dr. Beyan Asoba, J/ Jawar Mohammed and J/ Leenco Lata – May 2, 2012
Category: Advocacy/Activism, Human Rights, Land Grab, News, Nonviolent Struggle
Added on: May 2nd, 2012
Tags/Credits: Beyan Asoba, Jawar Mohammed, Leenco Lata, Oromo Struggle, Radio Afuura Biyyaa	Support Radio Afuura Biyyaa*
Radiyoon Marii: G/D Obbo...
lola korme said,
Waan gaarii dha. Jabaadhaa
May 3, 2012 @ 12:56 am
Afuura biyyaa nuu dhagesissu keessanif baay’ee baay’ee galatoma!!
Nuuf jiradha Uumuriin keessan nuuf yaa dheratuu!!
May 3, 2012 @ 8:44 am
” maal haa baasuf dhama raasu” jedhan. Impayeera Haroomsuuf?
May 4, 2012 @ 1:15 am
Leencoo Lataa nama umurii isaa guutuu qabsoo bilisummaa Oromooi dhabamsiisuuf hojjechaa ture fi yakkamaa gantummaan seeraan gaafatamu mirga kennitaniifii akka inni haasa’u godhuu keessaniif isin illee qaama shira Leencoo akka taatanitti hubatamtu. Leencoon waa’ee gaanfa Afriikaa maal beeka?Waa’ee Gaanfa Afriikaa fi addunyaa kanneen akka: Professor Makuriyaa Bulchaa, Professor, Asaffaa Jaal’ataa fi Mahammada Hassan fi kkf gaafadhaa. Nama dhimma kana irratti qorannoo yeroo dheeraa gaggeessee kanneen armaa olii dhiiftanii nama sobee beekaa of godhu Leencoo dhiyeessuu keessaniin ummata Oromoo dogoggorsuu osoo dhiiftanii dansa. Leencoo, kan ummata Oromoo fi kan isaa iyyuu nama hin beeknee dha. Kan mataa isaa iyyuu waan hin beekneef maatii isaa irraa adda bahee akka wadala harree bakkee keessa laba. Waa’ee ummata Oromoo waan hin beekneef, wayyaaneen funyaan keessaa horfitee biyyaa baaftee booda irraa ammoo maallaqaan bittee qabsoo walabummaa Oromiyaa irratti bobbaafatte. Kanaaf, kanneen Leencoo Lataa nama gootanii asi irratti dhiyeessitan yakka inni qabsoo ummata Oromoo irratti hojjetaa jiriu gargaaruu akka ta’e beektanii armaan booda yoo sirreeffattan dansa. Kana irraa kan hafe, isin illee sab-quunnamtii xoophiyaa waliin akka ilaalamtan bekuu qabdu.
May 4, 2012 @ 1:27 am
Dhimma Horn of Africa” irratt Leencoo Lata hafeeruun keessan kan koflaa isiin godheera. “Gowwaan kan ofii hin beektu;kan ormaa mooqxi” jedha Oromoon. Leencoon beekumsa akkasii oso qabaatee har’a maaliif biyya abbaa isaa wayyaaneef dhiisee faranjiin kadhatee baqattummaan Norway keessa jiraata.
Abbaa Mootii said,
Hunda dura nagaan waaqaa haadursu.
Nagaa kiyyatti aansuudhaan dhaamsi an qabu akka armaan gadii kanata’a.
Innis..Galaalchitoota seefee maran baga kanaan isin ga’e jechuu fedheetin.
yoodhaamsi kiyya kun isin geesse yeroo itti aanun yaada kiyya isiniif ibsa hangasiifuu nagaan jiraadha.
June 6, 2012 @ 10:54 pm
@ Hawwine Barii please stop blaming our hero Leencoo late ok, Oromumma ati har’a ittin dhaadattu kanaf bu’uura gudda kan xabateedhe ,si inni bara 17 bosoona sudaan kessatti nama dabarsedhe ati bara meqaa dabarsite bosona keessatti? u r heroen after computer ,stupid!
Seenessa saba said,
Leencoo lata/Atsee Yuhansii/ namtichii jedhamu sun Fakkatoota akka Uf wajiin Abbottaa Qabsoo Saba Oromoo bu’ureesan haayyootaf gootoowwan qabsoo irraa hobasuu Qabsooti abbaa ta’e Nama Nu Saba Oromootif WBO hanga guyyaa hara’ati gurgurachuti jiruu Basaasaa bekkama Dalidala kennaf Dugguuga sanyii kan nurrati rawwatee waan ta’ef Isaf fakkatoota akka isasi Sabni kan barbaduuf Qabsoof Osoo hin tannee Murtee ICC tif yaakkamtoowwwwaaan. Yoo akkana jedhu kannaa ragati qarqarameet akkanan mit Uummata Oromoo.